Five Octane 92 Mini Refineries to Be Built in Magway | Myanmar Business Today
HomeBusiness Five Octane 92 Mini Refineries to Be Built in Magway
Five Octane 92 Mini Refineries to Be Built in Magway
Five small scale Octane 92 refineries will be built in Magway Region after the Magway Regional Government has invited tenders for the projects to be implemented on 200 acres of land in Chaukkan Village in Pakkoku Township.
These refineries will become the country’s first ones to refine Octane 92 as other refineries in the country can only refine Octane 68.
The new refineries will refine oil from small scale wells in the region.
The project is worth more than $5 million investments and required the approval from the union government.
The companies have started constructions for the refines including roads, bridges, and power grids and Sunny Global Manufacturing Co. Ltd’s refinery is at the position near to commence.
Ninety percent of the oil in Myanmar is imported while the remaining 10 percent is produced locally.
Myanmar imports oil primarily through Singapore with monthly volumes of around 200,000 tons of gasoline and 400,000 tons of diesel. There are 2,000 fuel stations and 50 oil importer companies in Myanmar
According to Worldometers, Myanmar consumes 123,000 barrels per day (B/d) of oil as of the year 2016. Myanmar ranks 74th in the world for oil consumption, accounting for about 0.1% of the world’s total consumption of 97,103,871 barrels per day.
Myanmar produces 15,634.00 barrels per day of oil (as of 2016) ranking 85th in the world.
Octane 92 ဓာတ်ဆီများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် Mini Refinery အသေးစားရေနံချက် စက်ရုံ (၅) ခု အား တည်ဆောက်ခွင့် ပြုထားကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်း ၊ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ချောက်ကန် ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ်(၃၅၈/၁၈၉၆)ရှိ မြေလွတ် မြေရိုင်းအကျယ် ဧက(၂၀ဝ)ပေါ်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းလှမြို့နယ် ၊ မန်းသံပုရာကန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးရေနံချက်စက်ရုံတစ်ခု ရှိနေသော်လည်း ဒေသတွင်း ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များမှ ထွက်ရှိသည့် ရေနံများကို အဆင့်မီ စက်သုံးဆီ ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် 92 ဓာတ်ဆီချက်လုပ်နိုင်သော စက်ရုံ မရှိသေးပဲ 68 အထိသာချက်လုပ်နိုင်သေးရာ ယခုစက်ရုံများသည် ပထမဆုံး 92 ဓာတ်ဆီများထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုစက်ရုံများသည်ပဒေါ်လာ ၅ သန်းအထက် တန်ဖိုးရှိ ယခု လုပ်ငန်းအား ပြည်ထောင်စု သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီများက အချိုးကျကုန်ကျစရိတ်ကျခံ၍ စက်ရုံပတ်လမ်းများ ၊ အဝင်အထွက်လမ်းများ၊ ရေကျော်တံတားများနှင့် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ကုမ္ပဏီ (၅)ခုထဲမှ Sunny Global Manufacing Co.Ltd ၏ လုပ်ငန်းမှာ လည်ပတ်နိုင်ရန် နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
Previous articleShweTaung and AEON Form Joint Venture to Invest in Malls
Next articleGovt Lowers Vehicle Registration Fees